Faah faahin:- Nabadoon Bashiir Xagaleey oo lagu dilay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Nabadoon Bashiir Xagaleey oo lagu dilay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho
Koox hubeysan ayaa habeenkii xalay magaalada Muqdisho ku dishay nin nabadoon ah islamarkaana ka mid ahaa ergadii ka qeyb gashay doorashadii xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee lagu qabtay magaalada Cadaado.
Nabadoonkaan oo lagu magacaabi jiray Bashiir Maxamed Cali (Xagaleey) ayaa la dilay xilli uu kasoo baxay masjid ku yaala suuqa Bakaaraha, gaar ahaan qeybta khudaarta ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu kusoo dukaday salaadii maqribka.
Dad goob-joogayaal ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay in kooxihii falka dilka ah u geystay ninka nabadoonka ah ay islamarkiiba goobta isaga baxsadeen.
Ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka ee NISA oo soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay ayaa halkaasi ka sameeyay baaritaano culus oo ay ku ogaanayeen sida ay wax u dhaceen.
Meydka marxuumka oo muddo saacado ah yaalay goobta lagu dilay ayaa markii dambe laga qaaday.
Dilka nabadoonka ayaa la sheegayaa inay ka dambeeyeen labo nin oo dhalinyaro ah, kuwaas oo illaa iyo haatan aan la aqoonsan heybtooda, inkastoo dilalka ceynkaan oo kale ah looga bartay inay geystaan dagaalyahanada ka tirsan Al-shabaab.